အဖေ့ကိုစိတ်တိုနေတာလား…သား? – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on October 14, 2009 November 2, 2009 by kyawkyawoo	Posted in Father Pa PaTagged မိဘကိုချစ်တဲ့သားသမီးတိုင်း, အဖေအမေသက်ရှိထင်ရှာ, အဖေ့ကိုစိတ်တိုနေတာလား...သား?, တွေးမိတွေးရာ,ဲအဖေ၊အမေ, burmese muslim, Burmese Muslims, father and son, Love of parents, Myanmar Muslim, myanmar muslim family, myanmar muslim minority, Myanmar parents, Navedz words of love, religion, Video father and son, Video irritating parents? think again, Video love of father
ဒီ Youtube video လေးကိုမိဘကိုချစ်တဲ့သားသမီးတိုင်း ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့် ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
အဖေအမေသက်ရှိထင်ရှားရှိသူတွေ အတွက်အချိန်ဆိုတဲ့.. ကာလက…ဝါးမြိုသွားတဲ့အခါ အားလုံးသောသူများသည် တနေ့..အဖေ၊အမေတွေ ဖြစ်လာမှာကိုသတိရစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ဒီ Video လေးကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာဆို့ လာပါတယ်။
ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ Pa Pa ကိုပြေးမြင်မိလို့ပါ။
Youtube video ကိုဒီကယူပါတယ်။
One thought on “အဖေ့ကိုစိတ်တိုနေတာလား…သား?”
Swaleha Hj Ibrahim says:
let’s control ourself, never angry to our parents.